Treasure ratio | Ehupfumi Zvemari
Iyo Treasure inozivikanwa seyakakosha chikamu chemidziyo yebhizimusi bhizinesi. Izvi zvakare zvinoreva kunharaunda yekambani chero ipi umo basa guru kuronga nekugadzirisa chimwe nechimwe chezviito zvine chekuita nekushanda kwemari kuyerera kana inogona zvakare kuve kuyerera kwemari.
Iyo Treasure ratio inoonekwa sehukama hwakaenzana huripo pakati pehukuru hukuru uye izvo zvinotibvumidza kuona chikamu chavo. Mune zvehupfumi, chiyero chinozivikanwa sehukama hwakawanda pakati pezviitiko zviviri zvaunoda uye zvinotibvumidza kuona chiitiko chakati chechengetedzo, purofiti, nezvimwe.
Kune pfungwa ye mari reshiyo Yatove yakapihwa tsananguro dzinoverengeka, asi kuti unzwisise kuti chii uye mashandiro ayo, zano rekutanga rinodiwa kutanga naro, Treasure ratio ihukama hunotitendera kuti tiite kuyerwa kwekambani kutarisana nemubhadharo kana akateedzana ekubhadhara kupera kwacho kunowanzo kuve kwenguva pfupi. Iyi chaiyo ratidziro inoratidza isu kugona uko bhizinesi redu bhizinesi rinofanira kubhadhara izvo zvikwereti izvo zvinosimbiswa nekukura kwepasi pegore rimwe rekuverenga, izvi nezvikwereti uye nemari inowanikwa mukufarira kambani.
Chiyero chemari ndechimwe chemakodhi emari ayo anonyanya kushandiswa kuziva mamiriro emari ebhizinesi bhizinesi, izvi zvinoreva kuti ndizvo; mikana iyo kambani inayo yekubhadhara kwenguva pfupi, sezvatatotaura, huwandu hwemari hutatu hwatichataura pazasi:
0.1 Pakarepo mari yemari kana "kuwanikwa reshiyo".
0.2 Technical solvency ratio kana "liquidity ratio".
1 Iyo solvency ratio uye nemari reshiyo
2 Nzira yekuverenga chiyero chemari nenzira kwayo?
2.1 Iwe haunzwisise aya mazano kana mazwi?
Pakarepo mari yemari kana "kuwanikwa reshiyo".
Inotsanangurwa nemagweta akasiyana ezvehupfumi dzidziso uye accounting accounting sequotient yekukamurwa kwemaviri mari: "zviripo" uye "zvikwereti zvazvino".
Inowanikwa dzazvino zvikwereti = kuwanikwa kwenhamba.
Ichi chiyero chinoratidza kuti kambani inogona kana inogona kusakwanisa kusangana nezvikwereti zvenguva pfupi, izvi chete neinowanikwa kana homwe.
Technical solvency ratio kana "liquidity ratio".
Izvo zvinotsanangurwawo nemagweta akasiyana mune zvehupfumi uye dzidziso yeakaunzi seiyo quotient inokonzerwa nekukamurwa kweese ari maviri huwandu:
"Zvinhu zvazvino" uye "izvozvi zvikwereti".
Zvinhu zvazvino ÷ zvikwereti zvazvino = huwandu hwemari Ichi chiyero chinomiririra chinzvimbo icho kambani inofanirwa kusangana nemari inobhadharwa kubva mukukwanisika kwezvikwereti zvazvino, izvi zvichikonzerwa nezvikamu zvakagadzirwa nenhumbi dzazvino. Iyo kambani inoonekwa seisina matambudziko emari kana kukosha kwehuwandu hwemari hwakawanda kupfuura kana kuenzana ne1,5 (? Kusvika ku1,5), kana pasi pe kana kuenzana ne2 (? To 2).
Muchiitiko chekuti huwandu hwemari hunoratidza kunge husingasvike 1,5 (? Ku1,5), kambani ine mukana wakakura wekumisa kubhadharisa, izvo zvinoratidza kushomeka kwemari kuvhara mari pasi pegore rekuverenga.
Zvakajairika kuwira mukukanganisa kwekutenda kana kufungidzira kuti ine huwandu hwemari ye1, zvikwereti zvenguva pfupi zvaizopindwa nekubhadharwa pasina matambudziko, uku zvakadaro kukanganisa, sezvo kunetsekana kwekutengesa ese masiteki epfupi, Kuwedzera kune huipi hwevatengi, vanoratidza kuti mari inoshandira inova yakanaka uye kuti nekuda kwechikonzero ichochi midziyo yazvino iri pamusoro pezvikwereti zvazvino, izvi kubva pakuona kwekuchengetedza zvinogona kukwana.
Kana mamiriro acho akaitika mune iyo huwandu hwemari hwakakura kupfuura huviri, zvinogona kuratidza kuti zviripo "Zvinhu zvisina zvazvino uno" izvo zvinogona kukanganisa zvakananga purofiti uye kugadzira kurasikirwa.
Treasure reshiyo. Izvo zvinotsanangurwawo nevanoziva nezve economics uye accounting dzidziso sehuwandu hwezviripo pamwe neizvo zvinogoneka, izvi zvakapatsanurwa nezvikwereti zvazvino.
("Inowanikwa" + "inoonekwa") ÷ (zvazvino zvikwereti).
Ichi chiratidzo chekukwanisa kwebhizimusi bhizinesi kutarisana nezvikwereti zvenguva pfupi kana isingasviki gore rimwe rekuverenga, kune izvi, tichiverenga pazvinhu zvazvino, zvinofanirwawo kutarisirwa kuti masheya ezvivakwa haana kuiswa. Izvo zvinofanirwa kutariswa kuti kuti utarise kuti kambani haina matambudziko emari, kukosha kwehomwe yehupfumi kunofanirwa kunge kuri 1, izvi zviri chokwadi kuva fungidziro yezvakanaka pakushanda kwekambani.
Kana iyo reshiyo yemari iri pasi pe1 (? To 1), kambani inoisa njodzi yezvemari, sekumisa kubhadhara nekuda kwekushaya kukwana kwezvinhu zvemvura kuvhara chikwereti uye / kana kubhadhara kwayo. Kana zvakapesana zviri izvo kune yapfuura, mune iyo mari reshiyo iri yakakwira kana yakanyanya kupfuura 1, chiratidzo chekuti pane mukana wekuti pane zvakawandisa zvemidziyo midziyo, izvo zvinogona kukonzera kurasikirwa kwebatsiro zvinhu zvakafanana.
Iyo solvency ratio uye nemari reshiyo
Ose maratidziro ari mukutungamira kwekutiratidza iwo mwero we solvency iyo kambani inofanirwa kubhadhara zvikwereti zvayo, kuti izviise zvakapusa. zviri nyore sei kuti kambani ibhadhare chayakakweretesa nenguva uye nokudaro isingaunze mubereko, zvese mukati menguva pfupi-yenguva. Pane musiyano wakakosha kuti unzwisise kuti ese ari maviri anozadzisa zvakafanana basa, asi neimwe nzira. Nezve zvinorehwa ne "treasury ratio", zvikwereti zvenguva pfupi chete (risingasviki gore rimwe) zvinoonekwa, izvi zvinofananidzwa ne zviwanikwa zvine kambani, zviwanikwa zvemvura, kana izvo zvinogona kunge zviri mukati menguva pfupi. Naizvozvi isu tinogona kuona kuti iyo treasure ratio iri mukutarisira kuyera iyo solvency iyo kambani inofanirwa kubhadhara zvikwereti zvayo mune inokurumidza nguva nguva.
Musiyano wakakosha pakati pezviviri uyu unoratidzwa mu solvency ratio, nekuenzanisa kwayo zvinhu zvese zvekambani nezvikwereti, nokudaro zvichiita kuratidzwa kwechikamu chinosanganisira zvese zvinhu nekodzero dzekambani zvinopesana nezvikwereti nezvisungo. yeizvi. Iyo solvency ratio iri yoga, chiratidzo chisingatauri pamatanho ezvikwereti ane pfupi kana yakareba, uye haina kusiyanisa pakati pezvinhu zviri mvura uye izvo zvisiri, iri huwandu hwakawanda uye husina kunyanya iyo treasury ratio, mashandiro ayo akafanana asi kushanda kwayo kwakasiyana.
Nzira yekuverenga chiyero chemari nenzira kwayo?
Ehezve, kuita oparesheni yakadai iyi ingori nyaya yeruzivo, zvisinei, isu hatifanire kumira kufunga nezve ruzivo rwatinarwo mune zveupfumi nekuverenga dzidziso, yakawanda data inodiwa kuti tisvike pane iri nyore mashandiro.
Fomura yataizoshandisa kuverenga chiyero chemari ndiyo yakaratidzwa pazasi:
Inowanikwa + Inogoneka ÷ Zvikwereti zvazvino = Cash reshiyo.
Iwe haunzwisise aya mazano kana mazwi?
Sezvatakambotaura, kunyangwe iwe uchinge uchiziva nezvehupfumi uye accounting dzidziso, iwo mazano anokanganwika nyore, nekuti izvo isu tinokusiya iwe pano yakareruka revo yeimwe yeaya mazano aripo mukambani bhalanzi sheet:
Imari, izvo zvatinoziva uye tinodaidza iyo kambani "mvura".
Izvo zvinhu uye kodzero dzinokurumidza kushandurwa kuitwa mari, zvinonzwisiswa neizvi kuti isu tinotaura nezvevakweretesi, mari uye vatengi, zvese munguva pfupi.
Zvikwereti zvazvino. Izvo zvisungo uye zvikwereti zvine pfupi-yenguva yakatarwa zuva.
Rimwe rematambudziko makuru rinogona kunge riine bhizinesi chikamu kushaikwa kwesolvency yekuvhara zvikwereti, kambani isingakwanise kuchengetedza kugadzikana kwezvemari ndiyo imwechete iyo ine chikwereti uye inomira kubhadhara uye nekudaro ine chikwereti chakawanda uye zvakanyanya mukufarira, izvi kambani haingatombobuda mumamiriro ezvinhu aya kana kuronga kwayo kwemari uye accounting kwanga kusiri kukwana, nekudaro, tinoziva kukosha kwezvikamu zvakaita seyakaenzana yemari. Iyo kambani inogadzirisa, pamwe isingakurumidze, asi nekugara ichishanda uye kugona, ikambani inotaura zvakanaka nezvayo nenzira yekuverenga, inova kambani inokwezva vadyidzani nevanokweretesa, nekuda kwekuvimba kwayo uye kuvimbika, inosimbisa kuzvipira uye kuronga izvo parizvino zvinomiririra yakasimba kwazvo hupfumi hupfumi kune chero muridzi uye / kana mukweretesi Izvo zvakakosha kuti mucherechedze huwandu hwehupfumi sechishandiso chinobatsira kuziva kumisikidzwa kwekambani yedu uye ndeapi matanho atinogona kutora nekukurumidza sezvazvinogona.
Inofungidzirwa kuti huwandu hwehupfumi hunoratidzira kambani mune yayo yakakwana solvency kana yave kutenderera 1. Kana izvi zvikaitika, kambani iri mune mamiriro umo hukama pakati pemari uye inogoneka, uye kukura kwezvikwereti zvipfupi zvinosvika kana kufanana 1 .
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Treasure reshiyo
Chii chinonzi stagflation?